Burushka Eyga Alwaaxa, Xayawaanada loo yaqaan 'Com Comb', Xirfadaha Timo Joojinta Xayawaanka - Kudi
Suzhou Kudi Trade Co., ltd. waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara qalabka xayawaanka lagu xanaaneeyo iyo xayawaanka eyga laga celin karo ee Shiinaha waana ku takhasusnay arintan oo la xareeyay in ka badan 19 sano Warshadeenu waxay ku yaalay Suzhou, taas oo kaliya nus saac u jirta tareenka kana soo degaya garoonka diyaaradaha ee Shanghai Hongqiao. Waxaan leenahay labo wershadood oo u gaar ah aaladaha xayawaanka lagu xanaaneeyo iyo leysaska eyda laga celin karo, silsiladaha iyo alaabada carruurtu ku ciyaaraan oo leh wadar wax soo saar oo ka badan 9000 mitir murabac…
Xirmada Eeyga Shaqada Culus ee Khaaska ah 1. Xadhig jarista laqexi karo waa xadhig ballaadhan oo fidsan. Naqshaddani waxay kuu oggolaaneysaa inaad xarigga dib ugu rogto si habsami leh, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta xarigga eeyga ka soo wareegida iyo guntinta. Sidoo kale, qaabkani wuxuu kordhin karaa aagga xoog ku qaadka xadhigga, wuxuu kadhigi karaa xadhigga jarjarku mid la isku halleyn karo, una adkaysan kara xoog jiidasho badan, hawlgalkiina ka dhigaya mid fudud oo wuxuu kugula dhaqmayaa si raaxo leh. 2.360 ° Caadiga aan xadka lahayn ee xad-dhaafka ah ee xadhigga eyga dib u celin karo ayaa ...
Is Nadiifinta Slicker burush eeyaha 1. Is-nadiifinta is-nadiifinta ee nadiifinta eeyaha ayaa ka sameysan bir bir ah, sidaa darteed waa mid aad u adkeysi badan. 2.Burushka siligga ee foorarsiga ah ee burushkeena cirifka ah waxaa loogu talagalay inuu si qoto dheer u dhex galo dharka xayawaankaaga adigoon xoqin maqaarka xayawaankaaga. 3.Buraashka isdaba-marinta is-nadiifinta eeyaha ayaa sidoo kale uga tagi doona xayawaankaaga jaakad jilicsan oo dhalaalaysa ka dib markaad isticmaasho adoo duugaya isla markaana hagaajinaya wareegga dhiigga. 4.With isticmaalka joogtada ah, this is nadiifinta burush slicker yareyn doonaa ...
Waajibaadka Culus ee Eyga Lugta Lahayo Kiiskiisa waxaa laga sameeyay alaab ABS + TPR ah oo qiimo leh, kana hortageyso dildilaaca kiiska si shil ah. Xadhiggan dib u noqoshada leh wuxuu ku qaadan karaa cajalad naylo ah oo ka tarjumeysa illaa 5M, sidaa darteed waxay noqoneysaa badbaado badan marka aad eyga u shaqeyneyso habeenkii. 3.Hubka culus ee loo yaqaan 'Eug Leaks Eug Leash' oo leh dhaqdhaqaaq gu 'xoog leh oo si habsami leh uga noqoshada, illaa 50,000 jeer. Waxay ku habboon tahay eeyga weyn ee xoogga badan, dhexdhexaad ah iyo ka yar ...
Diirad iyo Xirfadle,
Suzhou Kudi Trade Co., Ltd. waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn qalabka xayawaanka lagu xanaaneeyo ee Shiinaha.
Warshaddu waxay ku taalaa Wangshan Industry Park, Degmada Wuzhong, Suzhou, Shiinaha,
kaas oo daboolaya in ka badan shan kun oo mitir laba jibbaaran.